Millennials uye Omni-Channel Maitiro Ekutenga
Maitiro Ekuramba Uchienderana neMireniyamu + Iwo Omni-Chiteshi Maitiro Ekutenga
China, April 24, 2014 Chishanu, April 25, 2014 Kelsey Washington
Nemafoni efoni muhomwe dzese, maMireniyumu akashongedzerwa uye vakajaira nzira nyowani yekutenga. Uine pamusoro pe $ 200 bhiriyoni musimba rekutenga gore rega, maMireniyumu iboka rakakosha kupa; asi vangani vatengesi vari kuzvitarisa ivo sezvavanogadzirisa marongero avo ekutengesa?
Kunyange Millennials vachiri kunakidzwa nekutenga-muchitoro, 85% vanofarira kushandisa nharembozha yavo kutsvaga zvigadzirwa vasati vatenga. Vatengesi vanoziva izvi vanochengetedza huvepo hwavo hwepamhepo hwakasimba uye vanoshandisa wongororo kune zvavanowana. 50% yeMillennials inoshanyira nzvimbo yemutengesi kana vapihwa 20% dhisikaundi, asi 72.7% yevatengesi havape macouponi efoni kune vatengi vavo. Vatengesi, avo vari kuunza bhizinesi ravo mune ramangwana, vachipa chikafu kuMillennials mumazano avo, vachaona budiriro huru mumakore anotevera. Mutengesi Warehouse vakaongorora pamusoro pevane chiuru cheMillennial vatengi nevatengesi, vachipa zvavakawana mune infographic pazasi.
Tags: Zviuru zvemakoreomni-chiteshichitorotsika yekutenga
Pasi Pese Mepu yeE-Commerce Boom
Sona: Yakabatana Order uye Inventory Management